Ewe siyaskena! Uvimba-Amalungelo oluntu kunye nobuGcisa bokuKhanya ngu ∴ PixelHELPER Foundation
22 Ngamana 2011
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski exhonyiweyo nemikhankaso Permalink
Ngubani ojonge abalindi. Iphulo lokulwa nokuhlola
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski On 22. Meyi 2011
Iindaba ziyavela kwaye zisasaze kwihlabathi lonke mzuzwana ngamnye. Emva kweendaba ezithile, umhlaba ubonakala uguquka ngokwahlukileyo kunangaphambili. Iindaba zichaphazela ubomi bethu. Sivuka nawe kwaye sikuse ebusuku. Nokuba kuphi emhlabeni nangaliphi na ixesha, ibhabhathane libetha amaphiko. Kwaye kukho into enokuvela enentsingiselo kuthi. Iitekhnoloji zala maxesha zilenze lincinci ilizwe. Kodwa iingxabano zengingqi kunye nehlabathi zibonakala zikhula. Abaninzi bayazibuza ukuba ngubani onokumthemba. Luluphi ulwazi oluthembekileyo nangoku nokuba uxolo kunye nokuchuma eJamani kuyaqhubeka. Yilapho kanye apho i-mission yethu iqala khona. Kwaye kuthungelwano lwamazwe aphesheya senza iziseko ezinokuthenjwa, ngamanye amaxesha zisengozini enkulu, kuba ufuna ubude bengalo ngaphambili ukuze wenze ngokuthembekileyo. Inani elipheleleyo kunye nokunyaniseka ukuzibophelela ebantwini ukukhusela iJamani.
Faka isicelo ngoku-kwihlabathi elinombala ngakumbi!
TED Thetha ngokuchasene nokubekwa esweni
I-State Monitoring: "INSA kwiNdlu"
kwaye United Stasi yaseMelika wema phezu kweendonga ze-American Embassy eBerlin nakwezinye iindwendwe zaseMerika eJamani, kuquka iDusseldorf, Frankfurt noHurgand. Isizathu salokhu kukuhlola okungahlaziyiyo kwi-NSA kunye nenkonzo yamfihlo yaseMerika.
I-NSA ivikela isicwangciso sayo sokujonga njengoko kuyimfuneko ukulwa nokukhuselana. Ngaphezu koko, kuqiqa ngokuthi, "Ukuba ungenanto yokufihla, akukho nto yoyikekayo". Ngelishwa, ukuhlolwa kwe-NSA kuqhubeka ngakumbi ngokwemfazwe yokulwa noyiko. Ifowuni yakho, i-Skype, i-Whatsapp yeefowuni ingaqwalaselwa, nangona ungenanto enxulumene namaphekula, usebenzisa umgaqo "3rd Degree Friend".
Ukongezelela, ezi ndlela zokubeka esweni zithintele ukuhlaselwa kwe-4 kuphela. Ngaba lufanelekile ukuba sibucala ngenxa yokhuseleko olungabonakaliyo kodwa lungaqinisekanga? I-PixelHELPER ayikholelwa kuyo, yingakho saqalisa le phulo.
Impumelelo yokuqala emva kokuboniswa kokukhanya kwe-13, kwisigqi sesonto kunye nokuxhamla kweendaba ezinkulu:
Ukuhamba kwe-boss yomntu oyiNtloko yeJamani yaseJamani.
Ngubani ojonge abalindi. Iphulo lokulwa nokuhlola Aprili 21st, 2020Oliver Bienkowski